PourtoA Two-way Cake - Natural | Buy online | SHOP.COM.MM
PourtoA Two-way Cake - Natural
တင်းတိတ်၊ အမဲစက်နှင့် မျက်နှာအရေးအကြောင်းများကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ခြင်း
အခြောက် နှင့် အစို two way သုံးနိုင်ခြင်း
PourtoA ကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
မျက်နှာပေါ်မှာ ခပ်ထူထူကြီး ဖြစ်မနေဘဲ ဖွေးဖွေးလေးနဲ့လှစေတယ်။ သုံးရတာလဲအဆင်ပြေတယ်။ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ Read more Hide
Two way cake လေးက ချွေးပေါက်လေးထိန်းညှိပေးပြီး သုံးလို့လည်းကောင်းပါတယ်။ Read more Hide
PourtoA ကိုသူငယ်ချင်းတွေက ညွန်းလွန်းလို့သုံးကြည့်တာ။ အရမ်းထူနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ပါးပါးလေးနဲ့မျက်နှာအလှကိုပုံဖော်ပေးတယ်။ မျက်နှာတင်းတင်းရင်းရင်းလည်း ရှိလာသလိုပဲ PourtoA Two-way Cake ကိုလိမ်းကြည့်ပြီးမှ။ ကြိုက်သွားပြီခုတော့။ Read more Hide
I realized that applying this PourtoA cake withawet sponge is the best and i love it. My skin feels smooth and silky after application. Read more Hide
Hnin Thazin Khin
PourtoA ရဲ့ two way cake တွေကိုသဘောကျပါတယ်။ အခြောက်ရောအစိုရောနှစ်မျိုးလုံးသုံးလို့ရတာ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ Read more Hide
Two-way Cake - Natural
Specifications of Two-way Cake - Natural